Talyaaniga oo ku guuldaraysay inay u soo baxaan Cayaaraha Koobka Aduunka 2018. – Bosaso Times News
Talyaaniga oo ku guuldaraysay inay u soo baxaan Cayaaraha Koobka Aduunka 2018.
admin November 14, 2017 Talyaaniga oo ku guuldaraysay inay u soo baxaan Cayaaraha Koobka Aduunka 2018.2017-11-14T08:45:38+00:00 No Comment
Kooxda kubadda cagta ee Talyaaniga ayaa ku guul daraysatay inay u soo baxdo ciyaaraha aduunka ee ka dhacaya sanadka danbe dalka Ruushka. Waa markii ugu horesay ee kooxda talyaaniga ay ka maqnaato ciyaaraha ugu weyn ee kubada cagta ee aduunka tan iyo 1958.
Kooxda Sweden ayaa hal iyo ibir ku reebtay kooxda Talyaaniga ciyaarihii isreebreebka (play offs) ee ay wada ciyaareen labada dal asbuucaan.
Markii hore waxaa lagu ciyaaray dalka Sweden jimcadii halkaas oo Sweden ay dhalisay hal gool, Xalayna waxaa lagu ciyaaray ciyaarti isku soo noqodka magaalada Milan ee dalka Talyaaniga waxayna ku dhamatay ciyaartu eber iyo eber halkaas oo labadii ciyaarood ay guushu ku raacday dalka Sweden, guuldarana dusha uga tuurtay xulka kubada cagta ee Talyaaniga oo ciyaaraha aduunka 4 jeer ku guulaystay.
Waxaa lays weydiinayaa meesha jabku ka raacay kooxda Talyaaniga oo ka mid ah kooxaha aduunka ugu waaweyn xaga kubada cagta dad badana ay jecel yihin ciyaartooda ayna taageeraan caalamka oo dhan. Soomaaliya waxay ka midtahay meelaha aadka looga tageero kooxda kubada cagta ee Talyaaniga taagerayaal badana ma arki doonaan kooxdi Asuuri ee ay taageri jireen markii ugu horeysay muddo ka badan 60 sano.
http://www.bosasotimes.com/talyaaniga-oo-ku-guuldaraysay-inay-u-soo-baxaan-cayaaraha-aduunka-2018/http://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2017/11/sweden-celeb2-epa.jpghttp://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2017/11/sweden-celeb2-epa-150x150.jpg 2017-11-14T08:45:38+00:00 adminsomali NewsSportsBosaso,Football,Italy miss world cup,SomaliaKooxda kubadda cagta ee Talyaaniga ayaa ku guul daraysatay inay u soo baxdo ciyaaraha aduunka ee ka dhacaya sanadka danbe dalka Ruushka. Waa markii ugu horesay ee kooxda talyaaniga ay ka maqnaato ciyaaraha ugu weyn ee kubada cagta ee aduunka tan iyo 1958. Kooxda Sweden ayaa hal iyo ibir ku...admin siyaadyusuf@hotmail.comAdministratorBosaso Times News
Bosaso, Football, Italy miss world cup, Somalia
« Dekedda Boosaaso oo weli muran ka taagan yahay
Inqilaab Militery oo Ka dhacay dalka Zimbabwi. »
Xaflad Heersare loo agaasimay oo lagu caleema saaray Beeldaajaha Beelaha Cali Saleebaan oo ka dhacday degmadda Carmo.
Caleema saarka Beeldaajaha Beelaha Cali Saleebaan oo loo diyaar garoobay